घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डच फुटबल खेलाडीहरू सर्जिनो डिस्ट बालपण कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
सर्जिनो डेस्टको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका, नेट वर्थ, जीवनशैली, कारहरू र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
सरल शब्दमा भन्ने हो भने, हामी तपाईंलाई सेर्जिनो डेस्टको उसको जीवनको शुरुका दिनहरूदेखि नै प्रसिद्ध भएको जीवन कहानी प्रस्तुत गर्दछौं। त्यो भन्दा पहिले, चित्रहरु मा उनको जीवनी को एक संक्षिप्त चित्र सारांश हेर्नुहोस्।
हो, हामी सबैलाई थाहा छ कि बार्सिलोनाले एक औसत खेलाडीसँग सम्झौता मोल गर्दैन। यसको मतलब यो हो कि सेर्जिनो डेस्टको ध्यान आकर्षण गर्न धेरै फुटबल क्षमताले लोड गर्नुपर्दछ। रोनाल्ड कोमान। दुर्भाग्यवस, धेरै फुटबल प्रशंसकहरु लाई उनको जीवन कथा थाहा छैन, जुन एकदम चाखलाग्दो छ।
सर्जिनो डिस्ट बाल्यकाल कहानी:
सुरु गर्ने हरु को लागि, सर्जिनो जियानि डेस्ट नोभेम्बर २००० को तेस्रो दिनमा एउटा सुरिनामास-अमेरिकी बुबा र नेदरल्याण्ड्सको अल्मेरेमा डच आमाको जन्म भयो। अनुसन्धानका अनुसार, उहाँ आफ्ना बाबुआमाको मिलनबाट जन्मेका एकमात्र सन्तान हुनुहुन्छ।
ती दिनहरूमा, सानो सेर्जिनो सधैं फुटबल खेल्नमा रुचि राख्थे। अल्मरेको सडकमा आफ्ना साथीहरूसँग हुर्कदै, जवान केटाले आफ्नो खाली समय सडक फुटबल खेल्न बित्यो। आफ्नो साथी देशवासी जस्तै Matthijs de Ligt, जवान सर्जिनो (तल चित्रमा) उसको शुरुका दिनहरूमा एक डाइ-हार्ड एजाक्स फ्यान थियो।
सर्जिनो डिस्ट परिवार पृष्ठभूमि:
जवान केटाको प्रारम्भिक दिनहरू उसले दैनिक जीवनको लागि आवश्यक पर्ने सबै खेलौनाहरूद्वारा आकर्षित गरिएको थियो। धन्यबाद, सर्जिनोका अभिभावकको उत्कृष्ट काम थियो। उनका बुबा अमेरिकाको राज्य सेवामा काम गरिसकेपछि सेर्जिनोसँग उनका फुटबल फुटबलका अधिकांश चाहनाहरू पूरा भए।
सर्जिनो डिस्ट परिवार मूल:
उसको पुर्खामा एक हेराई देखिन्छ कि प्रशंसक डिफेन्डर एक बहुजातीय जातीय छ। सत्य भन्नु हुन्छ, सर्जिनो डिस्ट परिवार मूलमा सुरिनामी र डच परिवार जरा हुन्छ।
मोरेसो, उसले दोहोरो नागरिकता राख्छ किनकि उसको आमा बुबा दुई भिन्न जाति हो। यद्यपि उनले केवल ठूला फुटबल प्रतियोगिताहरूमा अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। जे होस्, नेदरल्याण्डले पनि उनको राष्ट्रिय टोलीमा ल्याउन रोचक प्रस्तावहरु गरेको छ आफ्नो डच विरासत को कारण।
सर्जिनो डिस्ट क्यारियर कहानी (प्रारम्भिक दिनहरु बाट):
हामीले माथि उल्लेख गरेझैं युवा सेर्जिनोले सधैं आफ्नो जीवन क्यारियरको रूपमा पेशेवर फुटबल खेल्ने कुरामा आफ्नो दिमाग ठोक्यो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उनी cer वर्षको टेन्डर उमेरमा फुटबलको खेलमा हिडे।
सेर्जिनोलाई उनको सपनाको मार्गमा हिँड्न सहयोग गर्ने प्रयासमा, उनका आमा-बुबाले २०० in मा अल्मेरे शहर एकेडेमीमा भर्ना भए। त्यसबेला, दाहिने खुट्टा खेलाडीले २०१२ मा एजेक्स युवा एकेडेमीमा प्रवेश गर्नु अघि तीन वर्ष कडा प्रशिक्षण पायो।
सर्जिनो नष्ट प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
Joining Ajax youth academy gave the novice player enough time to improve his skills and amassaproper understanding of football rules. Do you know?… Sergino Dest started up his career asafull-time striker.
यद्यपि उनले चाँडै नै महसुस गरे कि उनी फ्रन्टलाइनको सट्टा दुर्लभबाट खेल्नमा राम्रो हुन्छन्। तसर्थ, उसले फुलब्याकमा स्विच गर्‍यो र उसको फुटबल क्षमता विकास गर्न जारी राख्यो। बिस्तारै, सेर्जिनोले आफ्नो खेल-खेलमा उत्कृष्ट सुधार रेकर्ड गर्यो र उनको एकेडेमीले तल देखाइएको धेरै अप्रमाणित ट्राफीहरू जित्न मद्दत गर्‍यो।
सेर्जिनो डस्ट रोड फेम कथा:
यसले डिस्टलाई छ वर्षको प्रशिक्षण र प्रतिबद्धता लिई अन्ततः उसले पेशेवर क्लब फुटबल खेल्ने सुअवसर पायो। वास्तवमा भन्ने हो भने, सेर्जिनो डेस्टले अक्टूबर २०१ 15 को १th औं दिनमा जोंग अजाक्स (एजेक्स आरक्षित टीम) को लागि आफ्नो व्यावसायिक पदार्पण गरे।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, अमेरिकी-डच खेलाडीले आफ्नो क्लबको लागि खेल्नु अघि युएस U१ U टीमको लागि पाँच प्रदर्शन गरे। २०१ 17 फिफा U-१ World विश्वकपमा एक मुट्ठीभर असाधारण फुटबल प्रतिभा प्रदर्शन गरे पछि, दायाँ खुट्टाको डिफेन्डर एजेक्स वरिष्ठ टीममा पदोन्नती भयो। यसैले, उनले जुलाई २०१ in मा एजेक्सको वरिष्ठ टीमको लागि डेब्यू गरे।
सर्जिनो डेस्ट सफलता कहानी:
जस्तै प्रशस्त खेलाडीहरूको साथ खेल्दै डोनी भ्यान-डेर-बीकसर्जिनो डेस्टले आफ्ना फ्यानहरूलाई प्रभाव पार्न धेरै आत्मविश्वास दिए। आफ्नो पहिलो वरिष्ठ सत्र को अन्त सम्म, युवा प्रतिभाशाली खेलाडी 35 प्रदर्शन गरेका थिए र Ajax को लागी दुई गोल गरेका थिए। यसैले, उनले २०२० मा एएफसी एजेक्स प्रतिभा को वर्ष पुरस्कार प्राप्त गरे।
यो बायो लेख्ने समयको लागि छिटो अगाडि, डेस्टले बार्सिलोनासँग अक्टोबर २०२० मा स्थानान्तरण सम्झौतामा मोहर लगाइसकेको छ। अरू के छ? धेरै फुटबल प्रेमीहरू उसको सम्झौताको शर्तमा छक्क पर्दछन्, जसमा कुल २€ मिलियन डलर शुल्क र € €० मिलियन डलरको खरीद खण्ड छ।
खैर, सबैजना धैर्यपूर्वक सेर्जिनो डेस्ट को एक को रूप मा आफूलाई स्थापित गरेर सम्झौताको अन्त्य पूरा भएको हेर्न प्रतीक्षा गर्दैछ २०२० को सर्वश्रेष्ठ फुटबल युवाहरू। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो। तल उसको एजेक्सको विदाईको संयोजन र एउटा भिडियो क्लिपले देखाउँदछ कि किन प्रत्येक क्लबले उनीहरूलाई उनीहरूको टोलीमा खोज्दछन्;
"अजमेक्स स्ट्याडको बस केटो जो एजेक्सको लागि खेल्ने सपनाको साथ हुर्कियो। पछिल्ला नौ बर्षदेखि यस क्लबको प्रतिनिधित्व गरेकोमा म धन्यको छु। एजेक्समा सबैलाई धन्यवाद, र फ्यानहरूलाई एक विशेष उल्लेख छ, तपाईं जहिले पनि मेरो मुटुमा विशेष ठाउँ राख्नुहुनेछ। अब नयाँ चुनौतीमा। ”
सर्जिनो डेस्ट गर्लफ्रेंड को हो?
सबैभन्दा पहिला, हामी यो तथ्यलाई इन्कार गर्न सक्दैनौं कि उसको राम्रो दृश्यले महिला प्रशंसकहरूलाई आकर्षित गर्दैन। उनीहरूको बारेमा कुरा गर्नु हुँदैन जसले उनीहरूको दिमागमा उनको भावी पत्नी बन्ने कल्पना गरेका छन्।
However, the young Barcelona player has focused more of his energy on his primary goal – football. Sorry to break it to you, Sergino Dest has no interest in getting intoarelationship commitment at the time of writing his Life Story. Therefore, he has no girlfriend at the moment.
सर्जिनो डेस्ट व्यक्तिगत जीवन:
हामीलाई यो चाखलाग्दो छ कि वृश्चिक-जन्मेका फुटबलरले आफ्नो राशि चक्रका विशेषताहरू प्रदर्शन गरे। उसको दृढ संकल्प, बहादुरी, र ईमानदारी सम्भवतः उनको क्यारियर उपलब्धिहरु को एक मूल रहस्य हो।
यसबाहेक, सर्जिनो डेस्टको व्यक्तित्व यस्तो भाँडा जस्तो देखिन्छ जति धेरै सकरात्मकताले भरिएको छ। तसर्थ, डच फुटबलर अक्सर आशावादी हुन्छ र हास्यको अद्भुत भावना राख्छ। केही बच्चाहरूलाई भेट्न डेस्टको एक भेटमा (तल चित्रमा) उनले आफ्नो व्यक्तित्वको बारेमा बोले। यहाँ उनले के भने;
“म खुसी छु कि मैले आज आफ्ना बच्चाहरूसँग मेरो सन्देश बाँड्न सकेँ। मलाई सकारात्मक व्यक्ति युवाहरूलाई प्रेरित गर्न मन पर्छ। आज मलाई स्वागत गरेकोमा धन्यवाद! "
सर्जिनो डेस्ट लाइफस्टाइल:
प्रशिक्षण मैदानमा ठूलो तनावको सामना गरिसकेपछि, असाधारण वि wing्ग-ब्याकले प्राय: आराम गर्न उसको समय लिन्छ। धेरै जसो अवसरहरूमा, डस्टले थकावट छोड्ने सुन्दर मार्गहरूमा टहल लिन्छ। अर्कोतर्फ, ऊ कहिलेकाँही नयाँ वातावरणको राम्रो महसुस गर्न छुट्टीमा जान्छ।
हामी मद्दत गर्न सक्दिन तर हामी यसको सराहना गर्न सक्छौं कि सेर्जिनो डस्टले आफूलाई आफ्नो दैनिक जीवनको लागि आवश्यक पर्ने विलासी सम्पत्तिहरूबाट आफूलाई अस्वीकार गर्दैन। उसको सम्पत्तीको एक हिस्साका रूपमा, डच फुटबलरसँग ए-क्लास मर्क कार छ, जसमा पुनःनिर्माण गरिएको छ। मोरेसो, त्यहाँ सबै सम्भावनाहरू छन् कि उनीसँग महँगो घर छ जुन जनताको लागि अज्ञात छ।
Sergino Dest’s transfer deal to रोनाल्ड कोम्यानको साइड, बार्सिलोना, आफ्नो करियर आय उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। यो बायोग लेख्दा, अमेरिकी-डच प्लेयरले अनुमानित वार्षिक तलब २.€ मिलियन डलर कमाउँछ।
सर्जिनो डिस्ट पारिवारिक जीवन:
Being born intoamultiracial family means that the wing-back would have to chooseaside to advance his career onanational level. Guess what? He ended up playing for his fatherland (United States). Now let’s tell you more about his Sergino Dest’s parents and family members.
सर्जिनो डेस्ट फादरको बारेमा:
आफ्नो प्रारम्भिक क्यारियर जीवनको आधारमा, त्यहाँ एक सम्भावना छ कि जवान डिफेन्डरले आफ्ना बुवासँग पर्याप्त समय बिताएनन्। यद्यपि यो सबै उनको बुबाको सम्पदालाई धन्यवाद छ कि उनी आफ्नो क्यारियर अगाडि बढाउन अमेरिकी राष्ट्रिय टोलीमा सामेल हुन सके। कम म भुल्दछु, सर्जिनो डेस्टका बुबा एक अमेरिकी नागरिक हुन् जसले राज्यहरूका लागि सेवाकारका रूपमा काम गर्छन्।
"हरेक पटक म नेदरल्याण्डको युवा टीम छनोटको अन्तिम चरणमा पुगें र यो बनाएको छैन। म जस्तो थियो… तर मेरो बुबाले मलाई अमेरिकी पासपोर्ट भएको सम्झना गराउनुभयो। ”
सर्जिनो डेस्ट आमाको बारेमा:
त्यहाँ डस्टको आमाले आशाजनक खेलाडीको सफलतामा अभिन्न भूमिका खेलेको तथ्यलाई इन्कार गर्ने कुनै ठाउँ छैन। सत्य भन्न सकिन्छ, उनले सधैं उनको छोरा प्रोत्साहन जब उनले फुटबल मा आफ्नो जीवन परिवर्तन जीवन शुरू।
Do you still recall those moments when you feel you’ve hit rock-bottom?… Of course, everybody usually faces such circumstances once inawhile. In such scenarios, Sergino Dest’s mom always becomes his consolation and the foundation that strengthens his resolve to bounce back to his feet.
सर्जिनो डेस्ट भाई बहनहरूको बारेमा:
म निश्चित छु कि प्रशंसनीय डिफेन्डरले अझ धेरै आशिष्‌ महसुस गरेको हुन सक्छ यदि उनीसँग एक भाई वा बहिनी छ। जे होस्, उसले आफ्नो टीमका साथीहरू र बाल्यकालका साथीहरूसँग भित्री सम्बन्ध गाँसेको छ जुन भाइचाराको अर्को बन्धन मान्न सकिन्छ।
सर्जिनो नष्ट सम्बन्धका बारे:
दुर्भाग्यवश, डेस्टले आफ्ना हजुरबा र हजुरआमाको बारेमा कुनै पनि जानकारी जनतामा साझेदारी गर्ने कुरामा विचार गरेका छैनन्। यस्तै प्रकारले उनले आफ्ना काका, काकी र अन्य आफन्तहरूको बारेमा गोप्य राखेका छन्।
सर्जिनो डिस्ट अनटोल्ड तथ्यहरू:
हाम्रो सर्जिनो डेस्ट लाइफ स्टोरी बेर्नुको लागि, यहाँ उहाँको बारेमा केहि तथ्यहरू छन् जुन तपाईंलाई उहाँको जीवनीको पूरा ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
The table below givesadetailed analysis of Sergino Dest’s salary since he joined Barcelona. Who would have imagined that he would be earningaweekly salary that isabit close to that of Ansu Fati?
प्रति महिना € 196,064
प्रति हप्ता € 45,176
प्रति दिन € 6,454
प्रति घण्टा € 269
प्रति मिनेट € 4.5
प्रति सेकेन्ड € 0.07
हामीले रणनीतिक रूपमा सेर्जिनो डस्टको तलबको विश्लेषणलाई घडीको टिकटमा राख्यौं। तपाईं यहाँ आउनु भएकोले आफूलाई कत्ति धेरै आयो भनेर खोज्नुहोस्।
यो के हो सर्जिनो डेस्टले कमाएको छ किनकि तपाईंले उसको बायो हेर्न सुरु गर्नुभयो।
तथ्य # १: ट्याटूहरू:
तिनीहरू मध्ये जो चाईमा इच्छुक छन्, तपाईंलाई निराश गर्न माफ गर्नुहोस् किनभने सर्जिनो डेस्ट तपाईंको मान्छे होइन। एक महान फुटबल पराक्रम भएता पनि, अमेरिकी-डच खेलाडी आफ्नो शरीर मा ट्याटू शाई बुझाउन को लागी उग्र छ।
तथ्य # १: किन उनले नेदरल्याण्डमा अमेरिकी राष्ट्रिय टीम छनौट गरे:
उसको ख्याति बढे पछि, फुटबल प्रेमीहरूले सधैं नै चिन्ता गरे कि नेदरल्याण्ड्समा हुर्केका डेस्ट किन डच टिमको भन्दा अमेरिकाको लागि खेल्छन्। व्यक्तिको जिज्ञासा स्पष्ट गर्न, सर्जिनो डेस्टले भने;
"डचम्यानको राष्ट्रिय टोलीले उनीहरूको चासो देखायो भने यो मेरोलागि कठिन निर्णय थियो।
तर मैले टीम युएससँग गत दुई बर्षमा अद्भुत भावना निर्माण गरें। त्यसकारण, म यु एस सोकरको योजना र सम्भावनामा दृढ विश्वास गर्दछु। ”
धेरै प्रतिष्ठित क्लबहरू द्वारा खोजी गरिएको एक खेलाडीका लागि, कोही पनि आफ्नो क्षमतामा श doubt्का गर्ने आँट गर्दैनन्। मोरेसो, विश्वको एक प्रतिष्ठित फुटबल क्लब द्वारा हस्ताक्षर गरिएको, यसको मतलब हो कि डिस्टसँग फुटबलको महान क्षमता रहेको छ। फिफा तथ्या .्कहरु उनी एक हो भन्छन् पूर्ण-ब्याकमा हमला गर्दै जुन पलिश गर्न आवश्यक छ.
अन्तमा, सर्जिनो डेस्टको जीवन कहानीले देखाउँदछ कि हामी हाम्रो क्यारियरको वास्तुकार हो। तसर्थ, हाम्रो सफलता हाम्रो निर्णयहरूमा छ। हामी प्रायः जीवनको चुनौतीहरूको बारेमा सावधानीपूर्वक विचार पुर्‍याउँछौं जुन हाम्रो महत्वाकांक्षामा पुरानो निर्णयहरू नगर्ने हो।
साथै, हामी हाम्रा प्रशंसकहरूलाई ठूलो आवाज भन्छौं जुन आमाबुवामा भर नपरी धेरै राम्ररी परिपक्व भएका छन्। हाम्रो शुभकामनाहरू तपाई संग छन्। डेस्टका लागि, उनका अभिभावकहरू उनको क्यारियर निर्णयको उत्प्रेरकको रूपमा उभिए। जे होस्, तपाईंसँग अभिभावक छैन कि केहि आधार मा तपाईं मजबूत भएको मा पाउन प्रबन्ध गर्नुहोस्। तपाईंलाई Kudos!
हाम्रो सर्जिनो डेस्ट लाइफ स्टोरी र बायोग्राफी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। कृपया हाम्रो साथ सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईं हाम्रो लेखसँग सही जस्तो नदेखिने कुनै चीज भेट्नुहुन्छ, दिमागमा राख्दै हाम्रो टीमले निष्पक्षता र सत्यताको लागि हेर्दछ।
पुरा नाम: सर्जिनो जियानि डेस्ट
निक नाम: Slick
जन्म मिति: 3rd नोभेम्बर 2000
जन्मस्थान: अल्मेरे, नेदरल्याण्ड्स
वार्षिक वेतन: € 2.3 मिलियन
नागरिकता: डुअल (अमेरिकी र डच)
उचाइ: १.1.75 मी (′ ′ ११ ″)